Fantatrao ve ny hacks miaraka amin'ny lohatenin'ny SEO ho an'ny fitomboana sy ny fifamoivoizana?
Amin'izao fotoana izao, ny lohateny tag SEO dia mbola ampahany manan-danja amin'ny foto-kevitra maoderin'ny Search Engine Optimization. Na izany aza, vao haingana aho dia nahatsikaritra fa nisy fiovana be dia be nitovitovy tamin'ny farany. Ary na dia eo aza ny olona maro naka fanandramana be dia be tamin'ny lohateny dia nahitam-pahombiazana ny SEO fa nahatonga fandrosoana azo tsapain-tanana tao amin'ny lahatsoratry ny pejy ao amin'ny SERP.
Ary eto izahay dia tonga eo amin'ilay teboka, nefa matetika dia tsy raharahian'ny liona ny anjaran'ny orinasan-tserasera, ary koa ny webmaster vaovao. Raha ny marina, lohateny maromaro SEO (raha vita ny marina) dia mety hitondra vohikala betsaka amin'ny tranonkalan'ny CTR (tranonkala tsikelikely) ny vohikala SEO rehetra, ary indraindray manome lanja ny haavon'ny fivoarana organika. Mazava ho azy, ny fampiasam-bola amin'ny fitaterana maimaipoana amin'ny alalan'ny CTR dia mety hiteraka fihenam-bidy amin'ny sehatry ny pejy raha tsy ao anatin'ny toe-javatra sasany.
Noho izany, ahoana no ahazoana tombony roa? Ndeha hofafantsika ny lohahevitry ny lohatenin'ny SEO. Afaka maika hanandrana ity hacks ity ianao, ary mazava ho azy, tsy ny rehetra no hiasa amin'ny tranokalanao azo antoka. Andramo fotsiny ny iray amin'ireto ary alaivo ny hevitra hoe aiza no hanombohana ny fanandramana manaraka miaraka amin'ny lohatenin'ny SEO.
Indraindray, amin'ny toe-javatra sasany, dia maro ny tranokala ahitàna fahita bebe kokoa amin'ny rindranasam-peo amin'ny antsipiriany. Ny fosafosafo dia ny isa kokoa no mahatonga ny pejy web anao hivoaka amin'ny fifaninanana amin'ny valin'ny fikarohana. Satria fotsiny ny isa dia zavatra manokana izay matetika no tratran'ny mason'ny mpampiasa eo amin'ireo vahoaka goavam-be amin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany.
Raha mampiasa WordPress ianao, ity manaraka ity ny hack manaraka miaraka amin'ny lohatenin'ny SEO mba hiasa tsara amin'ny tranonkalanao. Manoro hevitra aho ny hampiasa ny plugin Yoast amin'ny WordPress mba hanavao ny lohateny rehetra miaraka amin'ny fananana daty voatokana. Ary ampiasaina fotsiny ny fampiasana ny marika an-tsoratra ho anao isam-bolana na isan-taona amin'ny fomba mahaleotena. Indray mandeha indray - ity "hack" ity dia tsy mety amin'ny toe-javatra rehetra, fa ho an'ny fanontanianao manokana dia manaporofo fa tena tsara.
Toa hita fa mahita andiam-piantsoana maro kokoa kokoa. Ahoana anefa raha mety hampiakatra vetivety izy ireo amin'ny faktiora? Raha toa ka lava loatra ny marika famantarana anao, dia mety ho sarotra amintsika ny mahatakatra ny tena marina. Amin'izany fomba izany, mety mamaky azy io indray ianao. Ataovy toy izany ny milina fikarohana! Izany no mahatonga ny mari-pamokarana azonao ahafahana manana loko tsara indrindra ao anatin'ny 50-60 characters, manan-karena amin'ny teny fanalahidy tena ampiasain'ny tena mpikaroka.
Raha jerena fa tsy misy fehezanteny sy fehezan-teny mifampiankina dia matetika hita amin'ny fikarohana teny fototra, dia hevitra tsara hampiasana azy ireo ary hanampy ny olona hikendry. Ny tiako holazaina dia ny fampiasana ny matoanteny intuitive fampihetseham-po (toa mandeha, mahita, maka download, mijery, mianatra, sns. ), satria mety hanome zavatra mahafinaritra kokoa izy ireo, ankoatra ny teny filamatra notadiavina. Amin'izany fomba izany, ny fanomezana ny mpitsidika tahaka "kely fanampiny" dia mety hampitombo ny vidin'ny kliobaranao Source .